Nohenoina nandritra ny ora maromaro teny amin’ny Toby Ratsimandrava, ny mpanao gazety sady mpaka sary Yves Janhel, miasa ao amin’ny fahitalavitra Viva. Momba ny raharaha fipoahana grenady namoizana ain’olona teny amin’ny Kianjaben’i Mahamasina, ny 26 jona 2016 hariva. Voalaza fa ahina ho mahafantatra ny zava-marina teny Mahamasina ity mpanao gazety ity ka izay no antony nampanantsoina azy teny amin’ny Toby Ratsimandrava. Nilaza kosa ilay mpanao gazety fa tsy mahalala ny momba ity raharaha ity satria tsy niasa tamin’io fotoana io.
Vehivavy 30 taona no nalain’ny dahalo an-keriny, tany Andranovory Ankerika Malaimbandy, afakomaly. Voalaza fa nitondra fitaovam-piadiana mahery vaika ireo dahalo ireo nanafika tao amin’ity tanàna ity. Mitohy ny fanarahan-dia ataon’ny zandary sy ny fokonolona any an-toerana.
Dahalo iray maty voatifitry ny Kalony raha iray hafa kosa naratra mafy nandritra fifampitifirana tao Beravy Anosibe Manja, ny talata lasa teo. Dahalo miisa 25 nirongo basim-borona sy zava-maranitra no nifanehatra tamin’izy ireo. Basim-borona roa azon’ireo mpanara-dia. Azo daholo ny omby rehetra. Nidina teny an-toerana avy hatrany ny zandary avy ao amin’ny kaompanian’i Manja.